U-Lorena Franco. Imibuzo eli-11 yombhali wayo Uyayazi | Uncwadi lwangoku
U-Lorena Franco. Imibuzo eli-11 yombhali ka-Ella Knows
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi
Namhlanje ndithetha no ULorraine Franco, Umbhali odumileyo wase-Barcelona kunye nomlingisi, uthathela ingqalelo ukumkanikazi omtsha obizwa ngokuba noir yasekhaya. Ndiphendule Imibuzo engama-11 malunga nabo Iincwadi azithandayo, ikhondo lomsebenzi wakhe, izinto azithandayo, ababhali bakhe, iiprojekthi kunye neendaba azicwangcisileyo. Ukusuka apha ndiyabulela ngenxaxheba yakho enobubele kunye nexesha olichithe.
1 Uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo?
2 Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
3 Yiyiphi incwadi yokuqala eyakubetha kwaye ngoba?
4 Ngubani umbhali wakho omthandayo? Unokukhetha ngaphezu kweyodwa nakwezinye iindawo.
5 Nguwuphi umlinganiswa osencwadini onqwenela ukudibana naye kunye nokwenza?
6 Ngaba ikhona imania xa kufikwa ekubhaleni nasekufundeni?
7 Kwaye indawo oyikhethileyo kunye nexesha lokwenza oko?
8 Nguwuphi umbhali okanye incwadi echaphazele umsebenzi wakho njengombhali?
9 Uhlobo lwakho oluthandayo?
10 Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
11 Ngaba ucinga ukuba imeko yokupapasha yeyababhali abaninzi njengoko bekhona okanye bafuna ukupapasha?
12 Malunga noLorena Franco
Uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo?
Andikhumbuli ncam ukuba yeyiphi eyokuqala, nangona ndifunde okuninzi kwindlu yokupapasha i-El Barco de Vapor, endandiqale ngayo. Kananjalo nezo ze U-Esther kunye nehlabathi lakhe, Inkosana encinci...
Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
Ekuqaleni wabhala amabali. Mfutshane, amabali aqinisekileyo... kodwa njengebali lokuqala, lingena ngokupheleleyo ekubhaleni, kwenzeka ngo-2008 Ibali lemiphefumlo emibini, enokufumaneka kwiAmazon, nangona ndicinga ukuba indlela yam yokubhala itshintshe kakhulu ukusukela ngoko.
Umbambisi kwiryeNguJD Salinger. Kangangexesha elide yayiyenye yeencwadi zam endizithandayo kwaye yandibetha ngenxa yendlela ekwazi ngayo ukubonisa ubungqongqo bokufikisa (kule ye-40s), kunye nemingxunya kunye nokungafezeki kwayo, kunye nebali lomntu wokuqala iyenza ibe yeyokwenene, ingene ngokupheleleyo kwimbali kunye neziganeko zayo. Imvakalelo yokuba lilolo, ukungaqondi, amathandabuzo, ukuphikisana, ukubonakalisa kwaye, ngaphezu kwako konke, indlela ekubaliswa ngayo, kwaba nefuthe kwindlela yam yokuqonda uncwadi nakum ngelo xesha.
Tengo eziliqela Ababhali ababathandayo, abahluke kakhulu omnye komnye ngokubalisa kunye nomxholo, kodwa bakwazile ukundenza ndifunde isihloko ngasinye abasikhuphileyo, kwimeko yangoku, baya kuthi.
UJD Salinger, uThomas Mann, uVivian Gornick, uMargaret Atwood, uJoël Dicker, uErnest Hemingway, BA Paris, Liane Moriarty… Ewe, uluhlu alunasiphelo.
Okwangoku, ndizibeka kwinoveli yangoku, UMarcus Goldman, umbhali we Inyaniso malunga necala likaHarry QuebertNguJoël Dicker. Nangona njengombhali ndihlala ndizibeka ezicathulweni zabafazi, ndiyabuthanda ubomi uMarcus abunabo kwinyani; Inesisa kwaye iyinyani, iyafikeleleka kwaye ayifumaneki ngaxeshanye. Ubonakala njengomntu omkhulu kum.
Akuninzi, ngokwenene. Ngexesha lokubhala, ukuba andiyenzi ngaphandle, ndiyayidinga Ifestile ngaphambili kunye nokuthula. Ngaphezu koko cwaka kunye nedosi elungileyo ikhafeine. Andinazo izinto endizithandayo zokufunda; Ndifunda naphi na, Bahleli, bemi ekhaya, esitratweni, ngomsindo, ngaphandle kwengxolo ...
Owona mzuzu ndiwuthandayo ukubhala Ngu kusasa kunye neeyure ezimbalwa emva kwemini / ngokuhlwa, ngokufanelekileyo ekhaya. Vula mi iofisi kulapho ndifumana ukugxila khona kunye nokufumana inkuthazo. Ukufunda, nanini na, nangona ndihlala ndiyenza ngakumbi emva kwemini / ngokuhlwa.
Akukho namnye ngokukodwa, inyaniso. Ababhali bakudala kunye nabangoku bandiphembelele. ndiyayicinga lonto Umbambisi kwirye isekhona kum kwaye, ngokubhekisele kumbhali othile, izingqinisiso kwiinoveli zolwaphulo-mthetho ezinje ngoAgatha Christie okanye uMary Clark Higgins zindenze ndabona indlela endithanda ngayo kwaye ndifunxa imfihlakalo, xa ndifunda naxa ndiqala ukwenza ibali kwaye bhala. Namhlanje andinampembelelo ingako, Ndithabatheka ngakumbi yimikhwa yam emva kokuba "ndizamile" kakhulu ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ndiyifumene indlela yam njengombhali.
Uhlobo lwakho oluthandayo?
Ezi ndizibhalayo. Umsebenzi wam eAmazon ngomsebenzi wam wokupapasha wahlulwe ziziindidi ezimbini, ukuba andizithandi, ngekhe kubekhona ukuzisebenza. Ndinomdla kumxholo we ukuhamba ixesha, ibali langoku nelothando, kodwa ayisiyiyo yonke into egxila kwibali lothando. Kwaye kwelinye icala, yovuyo lwengqondo, inoveli emnyama kunye nemfihlakalo, Leyo ndiyibhalela abapapashi nakwamanye amazwe, ngoku ineSphere yeencwadi. NgoFebruwari 2019, phantse iminyaka emibini emva koko Uyayazi (Ediciones B) kufika umdlalo omnandi omtsha.
Ndigqibile ukufunda Umtshakazi ongumGypsy nguCarmen Mola kwaye ngoku ndiza kuqala ukufunda Okokugqibela, intliziyoNguMargaret Atwood.
Ndisebenza kumabali ahlukeneyo, ndisebenza kwifayile ye- ukuhlela yeenoveli esele zibhaliwe ngomxholo wokuhamba ngexesha kunye enye yengxelo yangoku ukupapasha kwiAmazon phakathi kwalo nyaka nonyaka ozayo, kwaye kwelinye icala, ukulungiselela a entsha evuyisayo kunye nombono womnye onamathele entloko
Ukufikelela kwindawo yokupapasha bekusoloko kuntsokotha, baninzi ababhali kunabafundi. Nangona kunjalo, ngoku umbhali unezinye iindawo ezifana nokuzipapasha kumaqonga anamandla njengeAmazon, kwaye kunokwenzeka ukuba afikelele kubafundi kwihlabathi liphela kwaye eli bali alihlali litshixiwe kwidrowa. Kwimeko yam nZange ndaya kukhangela umshicileli okanye ndangenisa umbhalo-ngqangi, khange ndijongane noloyiko "hayi", kuba bendisithanda isihloko sokuzipapasha Kwaye, enyanisweni, ndiyithanda kakhulu kangangokuba ndihlala ndidibanisa indlela endipapasha ngayo inoveli enye okanye enye ngohlobo oluthile. Ewe ngokunjalo, Ndiyabakhuthaza bonke ababhali, la mabali makhulu umpapashi angenako ukuwala, ukuzama ukunganikezeli. Akukho nto engenokwenzeka. Kukho, njengayo yonke into ebomini, ngethemba. Ndiyibonile.
Malunga noLorena Franco
Iincwadi zeAmazon, ikhonkco kwindalo iphela: http://relinks.me/lorenafranco
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » U-Lorena Franco. Imibuzo eli-11 yombhali ka-Ella Knows
Udliwanondlebe olukhulu. Ndizifundile iincwadi ezininzi ngalo mbhali kuba ngaphambili ndandisele ndiyazi inkangeleko yakhe njengomdlali weqonga kwaye ndinomdla wokubona indlela abhala ngayo. Zonke iincwadi endizifundileyo ndizithande kakhulu. Ndicinga ukuba unesitayile esihle, esahlukileyo nesangoku, kunye nekamva elithembisayo kuncwadi.
Iincwadi ezilungileyo kakhulu zomlingo
Iincwadi ezi-6 malunga ne-D-Day, ukubekwa komhlaba eNormandy